लगातार ५ वर्ष देखि बच्चा जन्माउँदै-मार्दै आएका एक दम्पति पक्राउ ! जन्मने बितिकै मुख थुनेर… – PathivaraOnline
Home > समाचार > लगातार ५ वर्ष देखि बच्चा जन्माउँदै-मार्दै आएका एक दम्पति पक्राउ ! जन्मने बितिकै मुख थुनेर…
admin January 30, 2019 समाचार	0
विगत ५ वर्ष देखि बच्चा जन्माउँदै- मार्दै आएका एक दम्पतिलाई पोल्याण्डमा पक्राउ गरिएको छ। जन्माउने बितिकै मारेर गायब बनाउने त्यस दम्पति माथि पोल्याण्डको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको समाचार अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले सम्प्रेषण गरेका छन्।
५ वर्षको अन्तरालमा जन्मिएका ४ सन्तानलाई उनीहरुले घर भित्रै हत्या गरेका थिए। जन्मने बितिकै प्लास्टिक झोलाले मुख छोपेर मार्ने गरेको उनीहरुले प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेको बुझिएको छ।
उनीहरुले प्रहरीलाई बयान दिए अनुसार तीन सन्तानलाई स्टोभमा राखेका थिए भने एकलाई रुख मुनि पुरेको थिए। आरोपी दम्पतिको घर वरीपरी रहेका छिमेकिहरुले प्रहरीमा सुराक दिए पछि अनुसन्धान शुरु गरिएको थियो।
२७ वर्षीय एलेक्जेन्ड्रालाई छिमेकिहरुले गर्भवती अवस्थामा धेरै पटक देखेको भएता पनि उनीहरुको घरमा सन्तान भने कहिले पनि देखेनन्। जसको कारण छिमेकिहरु शसंकित भएका थिए।
पेट सम्बन्धि समस्याको कारण आफ्नो पेट जहिले पनि ठूलो हुने छिमेकिहरुलाई बताउँदै आएकी एलेक्जेन्ड्रालाई उनका प्रेमी ३७ वर्षीय डेभिडले साथ दिंदै आएका थिए।छिमेकिहरुले प्रहरीमा शंका भएको बताएसँगै उनीहरु बसिरहेको फार्ममा प्रहरीले खान-तलासी गर्दा विभिन्न शंकस्पाद वस्तु मात्र नभई मृत बालकका हड्डीहरु मिलेको हो।
उनीहरुले हत्या गरेका चारै सन्तानलाई मार्न एकै तरिका लगाउने गरेका थिए। आरोपी महिलालाई ४ हत्या र पुरुषलाई ४ हत्यामा सहयोग गरेको मुद्दा दर्ता गराइसकिएको छ।
अपार धन प्राप्तीको लागी श्रीगणेशको यो चमत्कारिक मन्त्र!(जप्नैपर्ने)